Barcelona Oo Guul Ka Gaartay Juventus & Neymar Junior Oo Si Xun Ugu Baashaalay Bianconerri | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » La Liga Spain » Barcelona Oo Guul Ka Gaartay Juventus & Neymar Junior Oo Si Xun Ugu Baashaalay Bianconerri
Barcelona ayaa gaartay guushii ugu horeysay koobka International Championship Cup qeybtiisa waqooyiga America markii ay xalayto saqdiii dhexe garaaceen Juventus oo aheyd kooxdii ku reebtay quarter final-ka Champions League xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Neymar Jr ayaana tusay jamaahiirta Barcelona waxa ay tabi doonaan hadii uu ku biiro kooxda sida ba’an loola xiriirinayo ee Paris Saint Geramin, qeybtii hore ayuuna kala diray Bianconerri.
Ciyaariyahanka reer Brazil ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqadii 15-aad markii uu si dhaqso leh kubad hal iyo labo ah ula ciyaaray Paco Alcacer, si hubanti leh oo awood ku dheehan tahay ayuuna dhinaca bidix ee shabaqa kubadda ka taabsiiyay.
Siima daahin wiilkii hore Santos ayaa mar kale shabaqa Buffon gaaray daqiiqadii 26-aad markii uu shan xidig oo Juventus ah si fiican ugu gooyay ka hor inta uusan si khiyaano leh goolka u daba marin kabtanka.
Si kastaba Juventus waxey qeybtii dambe heshay gool uu madaxa ku dhaliyay Giorgio Chiellini kaas oo badal kusoo galay qeybtii dambe ciyaarta.
Barcelona ayaa aheyd kooxda mar walba awoodda sareysay iyadoo Ernesto Valverde uu guul gaaray kulankiisii ugu horeeyay walow uu qeybtii hore doortay shax adag.